Nezvedu - Shijiazhuang SD Kambani Ltd.
Yakagadzwa muna 1996, Shijiazhuang SD Company Ltd. ("SD Company") yanga iri mubhizimusi rekutengesa nekugadzira kweanopfuura makore makumi maviri uye uye parizvino ine vashandi gumi nevaviri muhofisi yemahofisi makuru muShijiazhuang uye vanopfuura vashandi ve200 mumafekitori ayo akabatana muHebei. Dunhu, mainland China.
Pakupera kwa2021, mari yese yakasvika mamirioni gumi emadhora ekuAmerica.
Mr. Wang Kaijun, iyo CEO uye Muridzi we SD Kambani ane makore anopfuura makumi mashanu ehunyanzvi ruzivo uye ndiye piyona wekugadzirwa kwehardware mudunhu reHebei.
Yakashongedzerwa nehunyanzvi michina yemhando yepamusoro uye zvishandiso, SD Kambani yave kunyatso kuzivikanwa muindasitiri uye imwe yevatengesi vekunze vezvinobatsira zvigadzirwa zvecheni muChina. Yedu fenzi zvigadzirwa zvinogona kuve zvakagadziriswa kuti zvienderane nemisiyano matunhu uye misika yeNorth America, Australia, Europe neIsrael.
Isu tiri mutambi mukuru muindasitiri yekuchengetedza indasitiri muUS. Tine 5% yemutengo wakazara weT Post uye 30% Nhanho muPoly Fence Post muUS uye maakaundi edu makuru anosanganisira Kumba Depot, neMenard.
Yedu chigadzirwa mutsara unosanganisira:
Magetsi fenzi machira, gedhi ruoko, insulator
T Post, Y Post, U Post nezvimwe kuUS, Europe uye Mid-East Musika
Wire Meshes: Welded Mesh, Chain Batanidza, Hex Mesh uye Vinyl Mesh
Fence Paneli: Yakakwira nzira, Rail nzira mapaneru
Yenguva Diki Fenzi: Migwagwa uye Kuvaka
Masuo: Anoshanda uye Anoshongedza Masuo
Zvigadzirwa zveBindu: Hanging Basket
Tsoka dzedu dzinenge dziri pasirese, takaenda kuzhinji kuratidzwa gore rega rega, seCANTON FAIR muChina, Fence Tech muUSA, THABS ---- South Africa, MITEX - Russia uye yekutengesa show muAustralia.
Tinofunga pamberi pevatengi; inopa masevhisi epamusoro, isu tine timu ine Ruzivo nehunyanzvi hweR&D, Improvements uye zvigadzirwa.
Tichiomerera kune yepakati bhizinesi musimboti we'Kupa Zvemhando yepamusoro Zvigadzirwa neYakanakisa Service ', zvigadzirwa zvedu zvinozivikanwa kwazvo kunze kwenyika zvine mukurumbira mukuru. Isu tasimbisa kutengeserana hukama nenyika dzinosvika makumi maviri nematunhu. Isu tinogamuchira noushamwari chero mhando dzebvunzo dzebhizinesi, kubatana kwebhizinesi pamwe nekutengesa.